“भीमसेन देया लज खङ्गलो वानला ल्याँसे, बिस्युवाने म्वायक सो झायला” (भीमसेनको लिङ्गले मन लोभियो कि, भाग्नु नपर्ने गरी हेर्न आउनुभयो कि) नेपालमा होली अर्थात फागुपूर्णिमा मनाउने चलन विभिन्न ठाउँमा फरक–फरक छ । भक्तपुरमा भने अनौठो तरिकाले होली मनाउने गरिन्छ । भक्तपुरमा भीमसेन गुठीका गायजुले भीमसेन मन्दिरको पाटीमा बसेर अष्टमीदेखि आज पूर्णिमासम्म ‘भीमसेन देया लज खङ्गलो वानला ल्यासे, बिस्यूवाने म्वायक सो झायला’(अर्थात् ‘भीमसेनको लिङ्गले मन लोभियो…विस्तृत समाचार »
मरेपछि स्वर्ग र नर्कको हिसाब किताब !
गरुण पुराणमा जीवन, मरण र कर्मफलको बारेमा धेरै कुरा पढ्न पाइन्छ । यसै कारण त हिन्दू धर्म मान्नेहरु घरमा कुनै सदस्यको मुत्युको शोकमा गरु यसै कारणले गर्दा घरमा कुनै पनि सदस्य मर्दा शोकको समयमा गरुण पुराण पाठ गराइन्छ । १८ वटा पुराणहरुमध्ये गरुण पूराणको छुट्टै विशेष महत्व मान्छन् हिन्दूहरु । किनभने यसको देवता स्वयं विष्णुलाई मानिन्ट्टै विशेष महत्व मान्छन् हिन्दूहरु । किनभने यसको देवता स्वयं…विस्तृत समाचार »
​तन्त्र, सेक्स र अध्यात्म ! ओशो रजनीश
तन्त्रले सबैभन्दा पहिले सेक्सलाई समाजमा आध्यात्मिक बनाउन प्रयास गरेको थियो । खजुराहोमा ठडिएका मन्दिर, पुरी र कोर्णाकमा रहेका मन्दिरहरु यसका प्रमाण हुन । तपाईंले कहिल्यै खजुराहो मन्दिरमा रहेको मूर्तिहरु देख्नु भएको छ । छ भने दुई कुराहरुको अनुभव गर्नु हुनेछ । पहिलो कुरा त यो हो कि नग्न मैथुनको प्रतिमाहरु हेर्दा पनि तपाईलाई यिनीहरु कत्ति पनि अश्लिल जस्तो लाग्ने छैन । फोहोरिजस्तो लाग्ने छैन ।…विस्तृत समाचार »
सती प्रथा आफ्नो मृतक पतिको चितामा पत्नी पनि जिउँदै जल्ने प्रथा हो । बि सं १९१०मा जंगबहादुर राणाले नेपालमै पहिलो पटक मुलुकी ऐन जारी गरी यसमा केही हदसम्म कमी ल्याउन सघाएका थिए । तर उनको मृत्यु हुँदा उनका ४२ रानीलाई सती पठाइएको इतिहाँसमा पढ्न पाइन्छ । जंगबहादुर राणाले १६ बर्षभन्दा मुनीका बिधवा महिला र ९ वर्षभन्दा साना उमेरका सन्तान भएकी महिलालाई सती जानमा रोक लगाएका…विस्तृत समाचार »
२ माघ २०७४
केही दिन अगाडि दिनरात गरी ४१ इन्च पानी परेको थियो । बिहानीपख हुस्सु लागेको थियो । अघिल्लो दिन संक्रान्ति मनाएकाले भोलिपल्ट पनि चाडबाडको हावा अडिरहेको थियो । सोमबारे औँसी परेकाले आइमाईहरू न्वाही धोई पूजापाठ गरी व्रत बसिरहेका थिए । चाडबाड मनाइसकेका दुनियाँ खेतमा काम गरिरहेका थिए । बिहानपख हुस्सु लागे पनि घामको तेज करिब ६० डिग्री चढाउ भएको थियो । तैपनि, आँगन, कौसी र सडकमा…विस्तृत समाचार »
२५ कार्तिक २०७४
भारतीय शासकको नजरमा दम्भी प्रधानमन्त्रीको उपमा पाएका कीर्तिनिधि विष्ट राष्ट्रियताको सवालमा खरो अडान राख्थे । २००८ सालदेखि नेपालको उत्तरी सीमामा राखिएको भारतीय सैनिक चेकपोष्ट उनकै प्रधानमन्त्रीकाल २०२६–२०२७ मा हटाइएको थियो । भारतीय सैनिक पोष्ट हटाउन खोज्दा तत्कालीन राजा महेन्द्र केही हिच्किचाएका थिए, भारत रिसाउला कि भनेर । तर, विष्टले अप्ठ्यारो परे बरु आफूलाई नै प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन राजालाई भनेका थिए । डा. विजयकुमार पौडेलद्वारा सम्पादित…विस्तृत समाचार »
२५ आश्विन २०७४
टुँडिखेल आँफैमा ऐतिहासिक छ । यही टुँडिखेलको इतिहास निक्कै रोमान्चक भेटिन्छ । लिच्छवी कालमा प्रतिङ्गीरा देवी र बज्र भैरवले बज्रतण्डी नामकी देवीलाई दाइजो दिएकाले यसलाई तुण्डी क्षेत्र भनिन्थ्यो । यही तुण्डी शब्दबाट यो क्षेत्रको नाम टुँडिखेल रहन गएको इतिहास भेटिन्छ । ६७८ सालतिरको कुरा, अंशुवर्मा राजा हुँदा अहिलेको टुंडिखेल क्षेत्रमा विभुवर्मा भन्ने भारदारले धारा बनाएका थिए । ०४१ बैशाखमा भोटाहिटीबाट रत्नपार्क जाने बाटोमा सुरुङ खन्दा…विस्तृत समाचार »
१४ आश्विन २०७४
बादसाह भिक्टोरियासित पैल्हे मुलाकात हुँदा बादसाहका हजुरमा रह्याका प्राइम मिनिष्टर, कमाण्डर–इन–चिफ, लाठ, डुक्, कपनी साहेब, चेरमीन्, प्रिन्स आलवट यति मानिस साथ थिया । यति मानिस साथमा ली कुइन बैठकमा खडा रह्याकी थिइन् । तेही बखतमा नेपालमा श्री प्राइम मिनिष्टर साहेब, उनका भाइ कर्णेलहरु, काजी सर्दार, मुसाहेब साथमा ली गया र मुलाकात भयो । नेपालका श्री ५ महाराजबाट पठायाको खरिता बादसाहाका हातमा दिनुभयो र खरिता हातमा…विस्तृत समाचार »
असुरमाथि दैवी शक्तिको जीतमा विजयोत्सव मनाइँदै आएको विजया दशमी हिन्दू प्राचीन र ठूलो चाड हो । विजया दशमीलाई बडा दशैँ तथा नवरात्रि पनि भनिन्छ । विजया दशमीमा भक्तहरुले दुर्गा भवानीको नौ रुपको पूरा आरधना गर्छन् । पौराणिक कथाअनुसार दुर्गा भवानीको जन्म असुर नाशका लागि भएको थियो । यही कारण बडा दशैँमा जगदम्बे दुर्गा भवानीको विशेष रुपले पूजा आरधना हुने गर्छ । दशैँको समय देवी…विस्तृत समाचार »